Vyapar Billing & Accounting Software | EZPOS
POS Solutions and Equipment Supplier
Vyapar Billing & Accounting Software
Billing , Inventory, Accounting, Estimate & Quotations, Track Orders, Receivables and Payable, Business Status, Business Reports, Online / Offline billing software
Vyaparသည်SMEတို့၏ငွေတောင်းခံမှု၊စာရင်းနှင့်စာရင်းရှင်းတမ်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုကူညီရန် အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ(SMEs)များအတွက်အိန္ဒိယတွင်ပြုလုပ်သောငွေတောင်းခံခြင်းနှင့်စာရင်းကိုင်ဆော့ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီအား ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Bangalore ရှိရုံးချုပ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီး ဝန်ထမ်း ၂၅၀ ကျော်ရှိသည်။
– ယနေ့၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ငွေတောင်းခံလွှာများဖန်တီးခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏စီးပွားရေးခြေရာခံရန် Manual ထည့်သွင်းခြင်းများနှင့် တွက်ချက်ခြင်းများကို အချိန်များစွာသုံးကြသည်။ များသောအားဖြင့်စီးပွားရေးသမားများသည် နေ့စဉ်၊ အမြတ်၊ ၀ ယ်လက်များ၊ စတော့ရှယ်ယာချိန်ညှိမှုများ စသည်တို့ကိုထိထိရောက်ရောက်ခြေရာခံနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ၎င်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်စေပြီး မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များကို အချိန်မီမချနိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
– “ Vyapar သည်၎င်းတို့၏ငွေတောင်းခံမှု၊ စာရင်းရှင်းတမ်း နှင့် Inventory စာရင်းစီမံခန့်ခွဲမှုများကို လုပ်ဆောင်ရန် အသေးစားလုပ်ငန်းများကိုရိုးရှင်း၊ စျေးသက်သာသော ဆော့ဝဲများပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဖြစ်သည်။
သင်တို့က Pen- Paper / Register ကိုသုံးနေ တယ်ဆိုရင်
•သင်ဘယ်လိုခြေရာခံတာလဲ? – ယနေ့/နောက်ဆုံးလရောင်းပြီး၊ သက်တမ်းကုန်မည့်ပစ္စည်းမည်မျှ၊ ပိုရောင်းကောင်းသနည်း။ လစဉ်အမြတ်/အရှုံးကဘာလဲ။ •အခွန်ဘယ်လိုဆောင်ရမလဲ? (ရှိလျှင်) – ငွေတောင်းခံလွှာများ / မှတ်ပုံတင်များကိုသင်ဝေမျှရလိမ့်မည်၊ စာရင်းကိုင်သည်ဒေတာ ၀ င်ရောက်ခြင်းအတွက်သီးခြားငွေတောင်းခံလိမ့်မည်၊ စာအုပ်များနှင့်ကိုက်ညီမှုများပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အခွန်မှတ်တမ်းအတွက်သီးခြားငွေတောင်းခံလိမ့်မည်။
သင်တို့က Excel Sheet ကိုသုံးနေ တယ်ဆိုရင်
•သင်မည်သို့စီမံခန့်ခွဲသနည်း? – ဖော်မြူလာများကိုကိုယ်တိုင်ထည့်ရ၊ အရောင်းအဝယ်အသေးစိတ်များနှင့်ချိန်ညှိချက်များကိုထည့်ရ၊ အမှားဖြစ်နိုင်ခြေများ၊ Excel စာရွက်အားစာရင်းကိုင်နှင့်ပြန်လည်မျှဝေရခြင်း၊ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရန်ခေါင်းကိုက်ခြင်း •အစီရင်ခံစာအားလုံးရသလား? – ကွဲပြားခြားနားသောအစီရင်ခံစာများကိုပြင်ဆင်မည့်အစားအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှု၊ အခွန်အစီရင်ခံစာများ၊ စတော့အစီရင်ခံစာများအပါအ ၀ င် Vyapar မှထုတ်လုပ်သောအစီရင်ခံစာ ၃၀ ကျော်ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်အချိန်ကုန်သက်သာစေသည်။
သင်တို့သည်အခြား Accounting application အချို့ကိုသုံးနေလျှင်
•သင်ဘယ်လောက်ပေးရလဲ? – အခြားအပလီကေးရှင်းများသည် modules များနှင့်အချို့သောအင်္ဂါရပ်များအတွက်အပိုဆောင်းကုန်ကျမှုများရှိနိုင်သည်။ txn ကဲ့သို့အသုံးမ ၀ င်သောအရာများပါ ၀ င်နိုင်သည်။ SMS၊ ငွေပေးချေမှုသတိပေးချက်များ၊ အွန်လိုင်းစျေး ၀ ယ်မှုစသည်တို့။ Vyapar သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် မကြာခဏသုံးသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အသက်သာဆုံးဖြစ်သည်။ •မိုဘိုင်းလ်မှာလည်းရှိလား? – Vyapar ကို sync feature နှင့်အတူတစ်ပြိုင်နက် android smartphone နှင့် windows အခြေပြု desktop devices များတွင်သုံးနိုင်သည်။ သင်ဆိုင်၌မရှိသည့်တိုင်အရောင်းအ ၀ ယ်အသေးစိတ်များကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
barcode scanning ကိုထောက်ပံ့သည်
•WhatsApp တွင် Quotations များကိုဖောက်သည်များနှင့် ပြုလုပ်၍ ၎င်းတို့အားရောင်းချခြင်းသို့ပြောင်းပါ
•သင်၏လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ ငွေတောင်းခံလွှာများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ
•ငွေတောင်းခံလွှာများကို WhatsApp/ Email တွင်မျှဝေပါ
•အမှတ်စဉ်၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်၊ ထုတ်လုပ်သည့်နေ့၊ အသုတ်နံပါတ်စသည့်ဖြင့် Stocks စတော့များကိုခြေရာခံပါ
•ဘဏ်သို့ထည့်ပြီးပြီးသောအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုခြေရာခံပါ
•အရောင်းအော်ဒါ နှင့် Quotation များ ပြုလုပ်၍ ၎င်းတို့အားရောင်းချခြင်းသို့ပြောင်းပါ
•Credit Note & Debit Note ကို ရရန်ရှိသူ၊ ပေးရန်ရှိသူနှင့်မျှဝေပါ
Vyapar Billing & Accounting Software အကြောင်းပိုမိုသိလိုပါက +959254474488 သို့ဆက်သွယ်ပါ။
သို့မဟုတ် အောက်ပါ ဆက်သွယ်ရန်ပုံစံတွင် သင့်ရဲ့ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်အားပို့ပေးပါ။